War Deg Deg Ah:-Israsasayn Hadda Dhex Martay Ciidamada Qaranka Somaliland Ee Ku Sugan Gobolka Sool Iyo Maleeshiyo Beeleed+ Khasaaraha Ka Dhashay | Saxil News Network
War Deg Deg Ah:-Israsasayn Hadda Dhex Martay Ciidamada Qaranka Somaliland Ee Ku Sugan Gobolka Sool Iyo Maleeshiyo Beeleed+ Khasaaraha Ka Dhashay
Hargeysa(Saxilnews)-War deg deg ah oo hadda naga soo gaadhaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool soona gaadhaya xafiiska shabakada wararka Saxilnews ayaa sheegaya in hadda israsaasayni ay dhex martay ciidamada qaranka Somaliland ee ku sugan jiida hore ee gobolka Sool iyo ciidamo maleeshiyo beeleed ah.
Waxaana israsaasayntani ay ka dhacday deegaanka Kalabaydh oo qiyaas ahaan 30Km dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Laascaanood,iyada oo halkaasina ay israsaasayn dhex martay ciidamada Milateriga ee qaranka Somaliland iyo dad deegaanka ku nool.
Israsaasayntan ayaa ka dhalatay sida ay xoguhu kusoo gaadhayaan Ramaasnews kadib markii ciidamada qaranka Somaliland ay damceen in ay maherad ku taala deegaanka Kala-Baydh ka qabtaan rag looga shakisan yahay inay hurinayaan colaada sokeeye ee ka taagan deegaanada koonfurta gobolka Sool,waxaana markii ay ciidamadu gudaha usoo galeen maheradan ee ay damceen inay qabtaan ka hor yimi oo diiday in raggaasi la kaxeeyo dadka deegaanka ku dhaqan.
Waxaana khilaaf soo kala dhex galay kadib halkaasi ka dhashay israsaasayntan dhex martay ciidamada iyo maleeshiyaadkan oo isa soo urursaday.
Warar hor dhac ah oo naga soo gaadhay israsaasayntan ayaa sheegaya in ay sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo ah dhimashada hal askari oo ka tirsan ciidanka iyo hal qof oo ka tirsan maleesho beeleedkan,wallow ay wararku sheegayaan in dhaawacna jiro,balse wali ma jiraan warar rasmi ah oo kasoo baxaya israsaasayntan dhex martay ciidamada qaranka Somaliland iyo maleeshiyaadkan.
Gabgabadiina deegaanada koonfurta gobolka sool ayaa wakhti xaadirkan waxa ka jirta oo laga dareemayaa sansaan colaadeed,iyaga oo degaanadaasina lagu soo daadiyey ciidamada qaranka Somaliland,waxaana deegaanadaasi koonfurta gobolka Sool wakhti xaadirkan ku sugan madax-dhaqameed,siyaasiyiin iyo odayaal u jooga sidii ay usoo afjari lahaayeen colaadan ugana dhalin lahaayeen deegaanadan nabad waarta.
Waxii warara ee soo kordha kala soco shabakada wararka Saxilnews